Mangataha fanampiana - BullyingCanada
/ Mangataha fanampiana
Call BullyingCanada ankehitriny
Ny ekipanay misy mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 350 voaofana dia tonga eto mba hanampy ny olona toa anao. Raiso fotsiny ny findainao ary antsoy:
ary araho ny bitsika hidirana amin'ny Ekipa Fanohanana!
Aza menatra fa eto izahay ho anao.
Tena ara-dalàna ny te hahafanta-javatra momba ny serivisy ataonay, saingy tadidio fa mila mahazo antoka izahay fa vonona hanompo ireo sahirana.
Tsy azoko antoka izay holazaina? Aza manahy! Ny namana virtoaly dia sariaka sy efa voaofana tsara — izy ireo dia hanao ny resaka amin'ny fanontaniana vitsivitsy.
Aleo SMS sa mailaka?
SMS aminay amin'ny fotoana rehetra! Alefaso SMS fotsiny amin'ny:
na azonao atao ny mandefa mailaka ny ekipa mpanohana anay 24/7/365 amin'ny: